Hospitaala Yunivarsiitii Gondaritti Haakimoota lama dabalatee Ogeeyyonni Fayyaa 22 tahan vaayirasii koroonaatiin qabaman - NuuralHudaa
Hospitaala Yunivarsiitii Gondaritti Haakimoota lama dabalatee Ogeeyyonni Fayyaa 22 tahan vaayirasii koroonaatiin qabaman
Hospitaala Rifaraalaa fi Kolleejjii Saayinsii Fayyaa Yuunivarsitii Gondaritti hakimoonni lamaa fi leenjifamtoonni shaakalarra jiran (intern) 20 Covid-19n qabaman.
BBCn maddeen yuunivarsitichaa irraa ragaa argate eeruun akka gabaasetti, hanga Kibxata darbeetti leenjifamtoonni 17, Arba’aa leenjifamtoonni afuurii fi Kamiisa ammoo tokko qabamuun, walumaagalatti haakimoonni 22 vaayirasichaan qabamanii jiru. Isaan keessaa torba dubartoota tahuus odeeyfannoon ni addeessa.
Kanaan walqabatees haakimoonni leenjifamtootaa lama hojii akka hin gallee itti himamuu fi Kamiisa irraa kaasee hojii akka hin galin gabaasichi ni addeessa.
Haakimoonni vaayirasichaan qabamuun itti himamee fi BBCn dubbisees sababii itti vaayirasichaaf saaxilamu danda’an yoo dubbatan, dhukkubsattoonni gara hospitaalichaa dhufan jalqaba kan wal argan isaan waliin ta’uu himanii, isaaniin erga ilaalamanii booda gara qorannoowwan biraatti kan ergaman ta’u ibsan. Kanarraa ka’uunis adeemsi hojii kun vaayirasichaaf akka isaan saaxiluu hin oolle shakkii qaban himan. Kana malees, wayita hojiisaanii raawwataniitti meeshaalee of-eeggannoo dhuunfaa gahaa qabaachuu dhabuunis saaxilamummaa isaanii akka ol kaase dubbatu.
Hakimoota hanga ammaatti vaayirasichaan qabaman keessaa kan haala cimaa ta’een dhukkubsatan akka hin jirree fi hedduun isaanis mallattoowwan dhukkubbii kan hin qabne ta’uu odeeyfannoon ni addeessa.
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa akka jedhuutti kanneen Covid-19 saaxilamtoota ta’an keessaa hojjattoonni wallaansa fayyaa tokko.
Addunyaarratti namoota Covid-19n qabaman keessaa dhibbeentaa 10 kan ta’an hojjattoota wal’aansa fayyaati jedheera.
Ityopphiyaatti weerarri vaayirasii kanaa jiraachuun erga mirkanaa’ee booda baatiiwwan jahan keessatti naannoolee biyyatti garaa garaatti hojjattoonni wal’aansa fayyaa dhaabbilee fayyaa keessa hojjatan vaayirasichaan qabamuun isaanii himamaa ture.
Lakkoofsi waliigalaa haakimoota vaayirasichaan qabamanii garuu hin beekamu.
July 31, 2021 sa;aa 6:48 pm Update tahe